30 | septembre | 2016 | filazantsaramada
« Kanefa ny razanao no niraiketan’ny fitiavan’i Jehovah, ka nifidy anareo zanany mandimby azy Izy mihoatra noho ny firenena rehetra, tahaka ny amin’izao anio izao. Koa forao ny fonareo, fa aza mafy hatoka intsony hianareo. » Deotornomia 10:15-16
Andriamanitra nanafaka ny olony izay nitaraina taminy andro aman-alina. Hita teo amin’ny fianan’ny olony ny fifaliana noho ny fanavotana nataon’Andriamanitra. Nefa nivadika tamin’I Jehovah ny olony rehefa nitranga ny fizahan-toetra. Nitady andriamani-kafa izy hamonjy azy. Tezitra Jehovah noho ny tsy fahatokian’ny olony Azy. Rehefa nahatsiaro ny hiverina tamin’i Jehovah anefa izy ireo dia namela ny helony ihany Andriamanitra. Niraiketan’ny fitiavan’Andriamanitra ny razan’izy ireo, ary nahatonga Azy hifidy ireto zanaka mandimby azy mihoatra noho ny firenena rehetra, tahaka izao anio izao. Hoy ny tenin’i Jehovah: « forao ny fonareo ary aza mafy hatoka intsony! » (ny famorana ny fo dia ny fanalàna ny loto tsy ankasitrahan’Andriamanitra) Tian’Andriamanitra hiverina Aminy ny olony ka tsy hampirafy Azy amin’Andriamanin’kafa. Manimba ny fiainantsika ny fahamafisana hatoka. Voakasik’izany isika izay mamaky izao Teny izao. Ny Tompo hampahery anao.
Ny 17 Septambra 2016 dia nihaona teto amin’ny Foibe Feon’ny Filazantsara Ampandrana ireo mpiara-miasa an-tsitrapo rehetra “volontaires” eto amin’ny faritra Antananarivo sy ny manodidina. Fotoana izay nahampahafantarana azy ireo ny Talen’ny feon’ny Filazantsara vavao, Atoa Andriamanjaka Daniel. Fihaonana fanindroany ao anatin’ny taona izay natao indrindra koa hisaorana sy hankasitrahana azy ireo amin’ny fanoloran-tenany eo amin’ny fampielezana ny tenin’Andriamanitra isan-toerana (Fiangonana, Sekoly, Fikambanana …). Nisy moa ireo “volontaire” roa izay notolorana marim-pakasitrahana manokana noho ny ezaka lehibe vitany teo amin’ny fampielezana ny “Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana” iandraiketany tao anatin’ny enim-bolana farany. Nifanandrify tamin’ny fandalovan’Atoa Eric Gates Talem-paritry Afrika sy Moyent Orient moa io fotoana io koa dia nisy ny fisaorany ny rehetra. Nahatratra 65 ireo “volontaires” tonga nanatrika ny fotoana.
You are currently browsing the filazantsaramada blog archives for the day vendredi 30 septembre 2016.